Sidee loo xukumaa liiska darajooyinka liiska Amazon?
Amazon waa kan ugu weyn ee e-ganacsiga adduunka. Maalin kasta malaayiin qof ayaa iibsanaya mareegtan, kor u qaadka dakhliga shakhsiyaadka iibka ah iyo faa'idada guud ee Amazon. Kor u qaadida liiskaaga Amazon ee liiska natiijooyinka raadinta waxay si weyn u kordhin kartaa aragtidaada iyo kor u qaadista dakhliga. Malaha ugu fiican ee lagu hagaajin karo liiska iibka ayaa ah tafaariiqda ugu fiican ee heerarka tayada leh ee qiime macquul ah. Intaa waxaa dheer, alaabtaada waa in had iyo jeer la saaro stock. Qodobada kale ee liisaska sida khibradda raadinta ee userka, maraakiibta degdegga ah, iyo bixinta oo keliya ayaa ku tiirsan. Nidaamyadani waxay u adeegi doonaan hababka ugu adkeysiga badan ee Amazon aad u xooggan.
Si kastaba ha ahaatee, meel ka baxsan garoonka ganacsiga hoose, waxaa jira waxyaabo kale oo soo jeedin ah inaad ogaatid. Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonnaa hababka aad udubdhexaadinaysid istiraatiijigaaga si aad u kordho darajadaada iibka.
waxaad jeceshahay inaad ku kordhiso iibintaada Amazon, isbedelka ugu fiican wuxuu noqon doonaa in la isticmaalo ilaha taraafikada sida jaaliyadaha heshiisyada. Waxaa jira jaaliyado badan oo forum oo loogu talagalay dukaamada Amazon kuwaas oo qiimeynaya heshiisyada iyo bixinta dadka kale talooyin halkaas iyo marka ay samayn karaan heshiis wanaagsan. Xubnaha bulsheed ee noocan oo kale ah ayaa aad ugu fiican helitaanka waxyaabaha ugu fiican ee qiimo macquul ah. Kuwani waxay ka heli doonaan khaladaadka qiimaha, wax-qabadyada, iyo fursadaha. Ha lumin fursaddaada inaad iibiso wax ka badan oo aad noqoto mid ka mid ah mid ka mid ah bulshooyinka wadaaga ah ee caanka ah. Hubso in qiimo-dhimistu ay muhiim u tahay inay iibsadaan dukaamada iibiya iyaga. Haddii alaabtaadu ay tahay mid tayo sare leh oo qiimo fiican leh, waxaad awoodi doontaa inaad fiiriso xayawaan qiimo leh oo degdeg ah.
Hacks search search
Sida aad u aragtay, waxyaabaha ugu iibka badani had iyo jeer ku dhajiyaan TOP ee natiijooyinka raadinta ee Amazon. Waxaa sharxi kara Amazon ujeedada koowaad si loo kordhiyo dakhliga. Sidaa darteed, natiijooyinkaaga ka sii fiican ayaa iibiya, sare ayaad u muuqaneysaa natiijooyinka raadinta, taas oo keeneysa iibsiyo badan. Sida laga soo xigtay xeerarka algorithm ee Amazon, meel kasta oo wax soo saarka ee natiijooyinka raadinta waxaa lagu xisaabiyaa xilli kasta. Sidaas darteed, xitaa haddii sheygaagu sareeyo heerka sare ee qaybtaada, macnaheedu maaha in lagu dhajin doono TOP of Amazon raadinta shuruudaha la xiriira.
Si aad u bedesho xaaladda iyo si wax ku ool ah saamigaaga Amazon ee liiska natiijooyinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho siyaabo macquul ah si aad u jabiso darajada iibka. Aan ka hadalno qaar ka mid ah.
Nooca muhiimka ah ee ololeynta ugu wanaagsan ee aad Amazon ku leedahay waa cilmi-baaris muhiim ah. Waxaad ubaahan tahay inaad heshid ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo qadarka sare ee muhiimka ah ee dukaamada isticmaala si aad u ogaato sheygaaga. Waxaad macluumaadkan ku heli kartaa adigoo isticmaalaya barnaamijka Amazon Sales Central ama Analysts Retazon. Waxaa intaa dheer, waxaa suurtogal ah in la isticmaalo Google Trends for xogta raadinta webka sida wakiil daciif ah haddii loo baahdo. Markaad sameysey liis ku saabsan shuruudaha raadinta ee ku habboon, waxaad u baahan tahay inaad ka baaraandegto Amazon shuruudaha sarreeya. Soo hel badeecadaada bogga natiijooyinka raadinta, riix bogga faahfaahsan oo iibso. Tani marba mar iyo in ka badan ilaa aad ka dareemi doonto horumarinta kowaad. Saameynta istaraatiijiyaddan waxay ku xirnaan doontaa arrimo badan sida qaab dhismeedka kharashka, heshiiska wada xaajoodka leh Amazon. iwm.
Xayeysiinta Ganacsi Vendor
Waxaad ka heli kartaa Amazon u dhiganta inta badan iibinta alaabta on Amazon Coupons. Waxay u adeegi kartaa gaadiidka dhiirigelinta leh ee sababo badan oo kala duwan. Xayeysiinta Ganacsiga Vendor waxay ku caan baxaan macaamiisha. Taasi waa sababta ay u saameyn karaan kobcintaada calaamaddaada iyo darajada iibka. Waxaad la kulmi kartaa sanduuqa dahabka ama dukaamada heshiiska. Waxaa jira tirooyin guud oo kooban si aad u hagaajin karto astaantaada xitaa xitaa xawaaraha iibka eber.
Waa sahlan tahay in la isticmaalo loona maareeyo marka aad sameyn kartid shandadaha korantada ee iibiya adiga oo jooga naftaada xarunta dhexe. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi kartaa inaad xakameyso miisaaniyaddaada. Xayeysiintu way xiran yihiin sida ugu dhakhsaha badan miisaaniyaddu waa daal. Mid ka mid ah faa'iido dheeraad ah waa in tigidhada korontada iibiya aysan u baahnayn maalgelin muhiim ah. Waxaad ku dallici kartaa qiimo dhimista iyo bixinta khidmadda lacag-bixinta. Shabakad shakhsiyeed
Si kor loogu qaado iibintaada oo loo horumariyo darajada iibka alaabta ee liiska natiijooyinka raadinta ee Amazon, waxaad si sahlan u abuuri kartaa shabakadaada. Heshiisyo badan oo aad haysato, ayaa sareeya waxaad ku dari doontaa raadinta Amazon. Marka, waxaad kor u qaadi kartaa darajada iibka adigoo iibsanaya wadarta guud ee iibka. Marka hore, waxaad la xiriiri kartaa asxaabtaada iyo qaraabadaada si aad u iibsato alaabtaada. Waxa kale oo aad lacag ku bixin kartaa adigu adigu adigu adigana alaabtadaada oo kaliya ku darso dadka. Markaad sidaa sameysid, waxaad heli doontaa kubbadda ballanka.
Warbaahinta Bulshada iyo blogging
Meelaha warbaahinta bulshada ayaa laga yaabaa inay u adeegaan sida ilaha taraafiga ee dheeraadka ah ee alaabtaada Amazon. Taasi waa sababta aad xisaabaadkaaga u samayso bogaga caanka ah sida Facebook, Instagram, Twitter, iyo Pinterest. Buuggani waa inuu ahaadaa badeecadaada oo aad ku biirto kuwa isticmaala iyaga oo iibsanaya. Xaqiiji in aad isku xirto liiskaaga Amazon ee bogga bogga. Waxaad u baahan tahay inaad si joogta ah u cusbooneysiiso macluumaadka ku saabsan xisaabaadka warbaahintaada si aad u ilaaliso hawsha aad ku jirto.
Waa macquul in la abuuro barta joogtada ah ee alaabtaada. Samee khabiir la aqoonsan yahay adigoo abuuraya waxyaabo xiiso leh oo cilmi baaris ku salaysan. Intaa waxaa dheer, waad ka dhigi kartaa faallooyinkaaga ku saabsan barta kale ee la xiriira ama wadahadalka. Habka ugu fiican ee loo wanaajin karo wacyigelinta noocaaga waa soo dirista martida. Si aad u badbaadiso waqtigaaga barta shakhsi ahaaneed iyo dhiirigelinta, waxaad la shaqayn kartaa inkasta oo ay saameyn ku leeyihiin gudahaaga.
Mid ka mid ah habka hal-abuurka ah ee lagu kordhin karo muuqaalkaaga shabakada ee shabakadu waa in lagu soo bandhigo alaabtaada Amazon. Waxaad abuuri kartaa jaraa'id waraaqo ama maqaallo oo aad u diri kartaa ururrada wararka ee ku yaal suuqaaga. Haddii aad leedahay xiriir la leh warbaahinta warbaahinta sida TV, wargeysyada, iwm. , waxaad waydiisan kartaa inay wax ka qabtaan alaabadaada. Haddii kale, waxaad ka bixin kartaa badeecooyinkaaga xayaysiisyada warbaahinada internetka iyadoo lala xiriirinayo boggaaga Amazon Source .